IsiXeko sePokotho sisizisa kwi-Android i "Sim City" yamandulo eyathandana | I-Androidsis
Ukuba usikhumbula ngokwenene iSixeko saseSim, nantsi iPocket City ye-Android yakho
ISim City sisiqinisekiso sokugqwesa ngokulawula sonke isixeko, kwaye ISixeko sase Pocket lowo uthatha ubungqina ukuzama ukusondela kwezo zabokuqala abakwazileyo ukuyiguqula ibe yenye yezona zinto zilawula kakuhle.
IPocket City ngumdlalo ohlawulwayo, kodwa inenguqulo yasimahla, yile nto siza kuthetha ngayo kule post. Thatha into ebalulekileyo "engundoqo" yeSim City: ukwakha indawo zokuhlala, ezorhwebo kunye nemimandla yabemi ukuba bathathe indawo kwaye baqale ukwakha isixeko sakho.
1 "IsiXeko saseSim" sokwenyani se-Android yakho
2 Zikhusele kulwaphulo-mthetho kwaye uphendule kwiintlekele
3 IPocket City kwinguqulelo yayo yasimahla
"IsiXeko saseSim" sokwenyani se-Android yakho
ISim City isishiye sibambe ongezantsi ukubona indlela abemi ababeziqhelanisa ngayo nezo ndawo esasiyakha. Ngamanye amagama, kuxhomekeke ekubeni sibeka iipaki, izikhumbuzo okanye izikhululo zamapolisa, iindawo zokuhlala zisuka kwiklasi yesithathu zaya kweyesibini. Ke kuye kwafuneka sithathele ingqalelo uthotho lwezinto ukuze sifumane okuninzi kwisixeko sethu.
Kwi-Pocket City sinayo efanayo nakuthi masityeni intloko kancinci kunye Ukwakhiwa kwesixeko. Njengoko sihamba ngokwamanqanaba, sinokufumana iipaki, izikhululo zamapolisa nokunye okuninzi ukuze isixeko sethu siyindawo ephupha ngayo ngabo bonke abaye bafuduka beqala ngobomi babo.
Kwaye ePocket City, njengakwiSim City, kuyakufuneka sazi indlela yokuphendula ngokufanelekileyo kulwaphulo-mthetho nakwiintlekele. Enye yeentlekele ezoyikwa kakhulu yimililo, kuba njengoko sasingenabasebenzi abaneleyo bokucima umlilo, umlilo waqala ukusasazeka ukushiya iindawo ezitshiswe ngokupheleleyo.
Zikhusele kulwaphulo-mthetho kwaye uphendule kwiintlekele
Isixeko esihle kakhulu kwaye sakhiwe kakuhle sinako ushiywe ngokupheleleyo esandleni sikathixo nanjengoko singazi ukuba siphendule njani kwezi ntlekele. Kuyinkuthazo enkulu ukukhathalela abemi kunye nezo ndlela kunye nezitalato esizishiye zingafakwanga nomsebenzi wethu oqhubekayo. Lumkela inkanyamba okanye olo qhankqalazo luza kuzalisa izitrato ngabemi abangonwabanga ngemigaqo-nkqubo yakho.
Sineentlobo ngeentlobo zezakhiwo zokuhombisa ezithi baya kusivumela ukuba "sinxibe" isixeko kunye nokutsala ezinye iintlobo zabemi ngamandla aphezulu okuthenga. Yongeza uthotho lwezilwanyana kunye nokuvula iziza ezitsha zokwandisa ukwanda kwesixeko sakho. Konke oku kuya kuba negalelo ekunikezeleni ukuba udlala yonke "iSixeko saseSim" kwi-Android yakho.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwiPocket City kukuba unako layisha isixeko sakho kwilifu kwaye uyigqithisele kwesinye isixhobo; Unokwenza kunye nomhlobo ukugcina eyidlala. Enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba singadlala iPocket City ngaphandle kweintanethi, ke iya kuba ngumdlalo okhetheke kakhulu kuloo maxesha angaxhunyiwe kwi-intanethi.
IPocket City kwinguqulelo yayo yasimahla
IPocket City yasimahla yinguqulelo enomda kumxholo kwaye inyanzela ukuba sibone intengiso ukuze sidlale. Oko kukuthi, ukuba ufuna ukonwabela onke amava anikezelwa yiPocket City, kuya kufuneka ungene ebhokisini kwaye ke ufikelele kwezo zinto zepremiyamu. Ngu I-2,39 euro uya kufumana yonke into kwiPocket Citnakwiselfowuni yakho kwaye ke ubuyise eyona dolophu yeSim ngamanye amaxesha.
Ngokubhekisele kubuchwephesha, IPocket City yenziwe kakuhle kunye nemizobo yinto onokuyilindela kumdlalo wale ndlela. Umbono "weSixeko saseSim", ufezekisile iziphumo ezibonakalayo kunye nomdibaniso owenziwe kakuhle ukuze ukwazi ukujonga umsebenzi wakho wokuba ngumphathi wesixeko. Ayisiyo eyaseSpain kwaye isandi sisebenza ngokukuko ukusisa kumgangatho womhlaba ukuze uve nevumba le-asphalt. Siyakhumbula ukuba azisekho iindidi zezakhiwo, nangona sivela kwinguqulelo yasimahla asinakukugweba oku.
IPocket City sisixeko esipheleleyo se "Sim City" kwaye ukuba uya ekuphumeni uya kuba nayo yonke imixholo ngentlawulo enye. Libala malunga nee-micropayments kunye nabanye abanomdlalo owaziyo ukuthatha ubungqina besi Sim City sathandana kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Uninzi lomxholo onokuyonwabela
Khumbula ukusukela kumzuzu wokuqala iSixeko saseSim sangaphambili
Umthuthukisi: Imidlalo yeCodebrew
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukuba usikhumbula ngokwenene iSixeko saseSim, nantsi iPocket City ye-Android yakho
UGoogle usebenza kwinkxaso yezixhobo zokuncedisa ukuva